Shiinaha Customized boorsada ardayda Dugsiga Dhexe-saareyaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > Boorsooyin > Bacda ardayda > Boorsada ardayda dugsiga dhexe
(1) Boorsadan loogu talagalay ardayda dugsiga dhexe waa mid aan biyuhu xirin, u adkeysanaya xirashada, yareynta culeyska, waxayna leedahay adeeg cimri dheer. (2) Naqshadeynta suunka qaabeeya S ayaa ah naqshad ergonomic ah. Ardayda dugsiga waxay u muuqdaan kuwo bilic ahaan dalbanaya. (4) Naqshadeynta qaab-dhismeedka badan iyo baaxadda weyn waxay haysaa waxyaabo badan. (5) Boorsadaan dugsiga dhexe waxay ku habboon tahay ardayda dhigata fasalka 7 iyo wixii ka sarreeya. wiilasha iyo gabdhaha
1. Soo bandhigida alaabada ee boorsada ardayda dugsiga dhexe:
(1) Shandadan iskuulka ee ardayda dugsiga dhexe waxay ka samaysan yihiin dhar leh cufnaan aad u sareysa oo dhar ah, dushana waxaa lagu daboolay daahan biyaha celiya, kaas oo si wax ku ool ah uga hortagi kara roobka inuu ku qoydo gudaha kiishka dugsiga muddo gaaban. Dharkani wuxuu leeyahay astaamaha u adkaysiga abrasionka iyo dareenka gacmaha oo aad u fiican.
(2) 210D nylon maro Oxford ah ayaa lagu isticmaalaa gudaha, kaas oo leh xoog jiido.
(5) Suunka hagaajinta suunka tararoolka ayaa loogu talagalay dhabarka, kaas oo loo isticmaali karo tarooli.
(6) Waxaan u adeegsanaa jiinyeer aan biyuhu kajirin sida furitaanka boorsada, taas oo hagaajin karta waxqabadka biyaha ee bacda iskuulka dhinac walba.
(7) Boorsadan loogu talagalay ardayda dugsiga dhexe waxay ku qalabeysan tahay dekedda lacag bixinta ee USB-ga ah, ku xir fiilada wax lagu buuxiyo si aad ugu isticmaasho shaqada lacag-bixinta. Si kastaba ha noqotee, korontada moobiilka korontada bixisa waxay u baahan tahay in horay loo sii rakibo.
(8) Waxaan u adeegsanaa jiinyeer iyo qalab tayo sare leh boorsadan dugsiga dhexe, taas oo wax weyn ka tari karta nolosha adeega boorsada.
2. Xaddidaadaha alaabada (qeexitaanada) boorsooyinka ardayda dugsiga dhexe
Dharka Oxford ee biyuhu xiraan
Dhererka 30cmX Width 15cmX Dhererka 45cm
3. Astaamaha iyo codsiyada alaabada boorsada ee ardayda dugsiga dhexe
(1) Shandaddan boorsada ee ardayda dugsiga dhexe waa mid aan biyuhu xirin, u adkeysanaya xirashada, yareynta culeyska, waxayna leedahay nolol dheer oo adeeg ah.
(2) Naqshadeynta suunka S-qaabeeya ayaa ah naqshad ergonomik ah.
(3) Farshaxanimada moodada ah waxay ka dhigeysaa boorsadan iskuulka ardayda dugsiga dhexe mid aad u qurux badan.
(4) Naqshad-dhismeedka badan ee awoodda badan leh ayaa qaban kara waxyaabo badan.
(5) Shandaddan dugsiga dhexe waxay ku habboon tahay ardayda dhigata fasalka 7 iyo wixii ka sarreeya.
(6) Boorsadan dugsiga dhexe waxay ku habboon tahay wiilasha iyo gabdhaha.
(7) In kasta oo qaabka iyo midabka boorsada ay muhiimad gaar ah u yeelan karaan ilmahaaga, waxaad kaloo rabtaa inaad mudnaan siiso naqshadaynta boorsada sida ugu macquulsan uguna macquulsan qoorta, garbaha iyo dhabarka. Si taxaddar leh ugu fiirso waxa ilmahaagu u tagayo ama ka tagayo dugsiga si aad u hubiso in aanay ku jirin buugaag culus ama kuwa wax ku dhejiya gaadhiga. Tani maahan fikrad xun. Yaraynta culeyskooda ayaa runtii caawineysa!
(8) Dhammaan agabyada dugsiga ee la iibsaday bilowgii sannad dugsiyeedka, boorsada ilmaha ayaa laga yaabaa inay tahay shayga ugu iibsiga badan. Laga soo bilaabo dib u dhigista buugaagta culus ilaa iskuulka, ilaa sanduuqyada qadada ee daadanaya, boorsooyinka ardayda dugsiga hoose waa inay ahaadaan kuwo waara, hadii kale waxay sii socon doonaan ilaa dhamaadka sanad dugsiyeedka. Boorso adag oo adkeysi leh ayaa yareyn karta culeyska celcelis ahaan waxayna yareyn kartaa walwalka walxaha culus, taas oo muhiim ah maxaa yeelay bacaha iskuulada isku dhafan ee geesaha laga buuxiyo waxay sababi karaan dhibaato qoorta iyo garabka waqti ka dib.
5. Xirxirida iyo gaarsiinta boorsooyinka ardayda dugsiga dhexe
(2) Cabbirka hal xirmo ee caadiga ah: 45cm X 30cm X 15cm, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka naqshadeynta iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka.
(3) faahfaahinta xirxirida: 48cm X 33m X 45cm. 10PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh.
(8) Haddii loo baahdo, waxaan naqshadeyn doonnaa xirmada boorsadaan dugsiga dhexe sida waafaqsan shuruudahaaga.
(9) Haddii aad ubaahantahay shaybaarka boorsada ardayga dugsiga dhexe, waxaan dooran doonaa inaan kuugu soo dirno diyaarad.
(1) Waxaan si adag u xakamayn doonnaa tayada badeecada oo waxaan kuu soo gudbin doonaa adiga oo maraya heerka 100%
(4) Ka dib marka muunad la iibiyo, haddii nuqulkii ugu horreeyay loo baahan yahay in wax laga beddelo, waxaan wax ka beddelaynaa muunadda sida ku cad faahfaahinta wax ka beddelka. Nidaamka oo dhan ee soo saarista muunadda labaad waa gebi ahaanba bilaash.
(5) Waxaan si dhakhso leh kuugu soo wargalin doonnaa horumarka wax soo saar ee alaabta amarka inta lagu gudajiro wax soo saarka, si aad si dhakhso leh u fahmi karto heerka amarka.
(6) Waxaan xiriiri doonaa 24 saac. Waxaan u isticmaali doonaa isgaarsiin hufan si loo hubiyo isgaarsiinta macluumaadka habsami leh.
A: 500-1000 wareegga wax soo saarka wareegga 30-35 maalmood.
B: 1000-3000 wareegga wax soo saarka wareegga 35-40 maalmood.
C: 3000-5000 wareegga wax soo saarka 40-45 maalmood.
D: 5000-10000 wareegga wax soo saarka wareegga 45-50 maalmood.
Q4. Muddo intee le'eg ayey tahay waqtiga hoggaaminta wax soo saarkaaga? Miyaad bixisaa shay-baarka? Ma bilaashbaa mise waa dheeri?
Q5. Intee in le'eg ayey kugu qaadaneysaa inaad la xiriirto oo aad jawaab celiso?
Q6. Qaab sheegis ah kee aqbashaa? Immisa maalmood ayaa muddada xigashada?
(3) Waxaan nahay soo saaraha boorsooyinka iskuulka Disney, boorsooyinka Wal-Mart iyo wax soo saarka Samsonite. Fadlan ku kalsoonow tayada wax soo saarka.
Calaamadaha kulul: Boorsada ardayda dugsiga dhexe, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka